Dịkarịsịrị; ịnyịnya: Ndị njem nleta juru na Guatemala City nkwari akụ mgbe ala ọma jijiji 6.9 gasịrị na 1: 29am
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Guatemala » Dịkarịsịrị; ịnyịnya: Ndị njem nleta juru na Guatemala City nkwari akụ mgbe ala ọma jijiji 6.9 gasịrị na 1: 29am
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Guatemala • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a
eTN Reader na njem nleta Josh Gates tweeted: A Ebube 6.9 ala ọma jijiji ka mere Guatemala Obodo. Nnọọ njem ebe a na ala 15 nke ụlọ nkwari akụ m. Ok… so… Ihi ụra?
A tụrụ ala ọmajiji ahụ ike 6.9 na 1.29 nke ụtụtụ ụbọchị Wenesde. Ọ dị nso na ókèala Mexico:
143 km W nke Guatemala City, Guatemala / pop: 995,000 /
15 km N nke San Marcos, Guatemala / pop: 25,100 /
5 km SE nke Tejutla, Guatemala / pop: 2,700 /
Na mkpokọta, ọnụ ọgụgụ ndị dị na mpaghara a bi na ụlọ ndị nwere nnukwu nsogbu na ala ọma jijiji na-ama jijiji, n'agbanyeghị na ụfọdụ ụlọ na-eguzogide ọgwụ dị. Typesdị ụlọ ndị kachasị ewu ewu bụ mgbidi apịtị na mgbidi (metal, osisi, GI wdg).
Ala ọma jijiji n'oge na-adịbeghị anya na mpaghara a kpatara nsogbu ndị ọzọ dịka mbuze nke nwere ike iso kpata mfu.
N'oge a enweghị akụkọ banyere ọnwụ, mana ụdị ala ọma jijiji a nwere nnukwu mbibi na egwu ndụ.